Handa ny visa ho any Frantsa... ho vitan'ny Gasy? | Hery - Tsiky dia ampy |
Handa ny visa ho any Frantsa... ho vitan'ny Gasy?
2013-06-21 @ 07:18 in Eritreritra mandalo
Tantara nanaitra ahy no holazaiko eto, tantarana vehivavy senegalezy iray. Fa mialoha an'izany aloha, tsy misy idirany mihitsy, kay androany ny 21 jiona izay araka ny mahazatra hoe ny andro lava indrindra aty amin'ny ila-bolantany avaratra. Manomboka androany koa izany ny fahavaratra, izay tsy midika hoe manorana aty fa vao maika aza mafana. Toa ity ny sary napetrak'i Google ho fanamarihana izany :-)
Fa ny tena resaka hoy aho teo dia ny momba an'ity Selegalezy iray ity izay antsoina hoe Bousso Dramé. Nahazo voalohany tamin'ny fifaninanana tsipelina frantsay izay nataony izy. Ny valisoa azony tamin'izany dia tapakila mandeha mandroso sy miverina any Paris Frantsa, sy iantohana fihofanana mikasika ny fanamboarana sarimihetsika any Paris ihany. Nolaviny indray anefa izany ho fanehoana ny tsy fankasitrahana ny ataon'ireo mpiasan'ny Consulat de France ao Dakar. Ary nandefa taratasy ho ren-tany ho ren-danitra izy nilazàny izany.
Ny taratasy nalefany, dia tsy mikasika mivantana azy irery fa ny zava-mitranga amin'ny ankapobeny manjo an'ireo Senegalezy izay mangataka fahazoan-dàlana miditra any Frantsa. Marina tokoa fa tanin'izy ireo no angatahana hidirana, manana zo izy hampiditra na handà ny olona mangataka hiditra ao amin'ny taniny. Kanefa tokony atao hatrany ao anaty fifanajàna amin'ny samy olombelona izany.
Dia lasa ny saiko hoe mba hisy Malagasy hahavita zavatra toa izany ve? Mety tsy hisy fiantraikany mivantana ho an'ny fanomezana visa ao amin'ny consulat de France ilay izy saingy hahatonga saina ireo vazaha hafa mipetraka any an-tanin'olona mba hanaja indrindra indrindra ireo tompon-tany... na dia hoe ireo vahiny ireo aza no manan-karena.
Ny kaonty twitter-ny : https://twitter.com/BoussoDrame
Ny interview nataony tao amin'ny Jeune afrique : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130621145044
Toa izao ilay taratasy nalefany: (Loharano: vipeoples.net)
Mazotoa daholo indray.